Maxaad u “argagaxdaa” marka mobile-ka lagaa qaado? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxaad u “argagaxdaa” marka mobile-ka lagaa qaado?
Maxaad u “argagaxdaa” marka mobile-ka lagaa qaado?
Dhaqanka noocaas ah wuxuu xiriir la lahaan karaa dhibaatooyiin kale ee caafimaad, sida warbixinta lagu sheegay. Waxaa ka mid ah, walbahaar, murugo, hurdo la’aan iyo damiinnimo.
“Telefoonnada casriga ah, waa in la iska daayo, lana fahmo dhibaatada uu isticmaalkoodu leeyahay,” waxaa sidaa sheegay mid ka mid ah dadka qoray warbixinta, Nicola Kalk, oo ka tirsan qeybta Barashada Cilmu-nafsiga ee King’s College, London.
“Weli makala cadda in telefoonka uu yahay dhibaatada ama barnaamijyada lagu shubo ee dadku isticmaalaan,” ayuu hadalka ku daray Dr Kalk.
“Sikastaba, waxaa loo baahan yahay wacyigelin dadweyne oo la xiriirta telefoonnada casriga ah iyo wixii gudahooda ku jiro iyo isticmaalka carruurta iyo dhallinyarada. Waalidiintu waa in ay ka warhayaan wakhtiga ay carruurtooda ku bixinayaan isticmaalka mobile-lada.”
Samantha Sohn oo wax ka qortay warbixinta cilmi-baarista waxay sheegtay in qabatinka “uu yeelan karo cawaaqib aad u xun oo caafimaadka maskaxda ah iyo sida ay maalin kasta u falgasho maskaxda. Waxaana loo baahan yahay baaritaan dheeraad ah in lagu sameeyo dhibaatada adeegsiga telefoonnada”.
Balse, Amy Orben, oo ah baare caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Cambridge, waxay ka digtay in la maleysto in xiriir caadi ah uu ka dhexeeyo dhibaatada telefoonnada casriga ah iyo walbahaarka.
“Waxaa horey loo caddeeyay in saameynta telefoonnada casriga ah, aysan ahayn hal dhinac oo keli ah, balse in sida ay tahay niyadda qofka ay keeni karto isticmaalka badan ee mobile-ka,” ayey tiri Dr Orben.
Previous articleMagaca iyo Sawirada ninkii ka dambeeyay Weerarkii London oo lasoo bandhigay (Sawirro)
Next articleWaa halkee meesha ugu dhimashada badan duulimaadyada dunida?
XOG:Waare iyo Lafta gareen oo Muqdisho kawado arin muhiimad weyn uleh N&N iyo mucaaradka ka cabsi qabo
Kaalintee ayey Soomaaliya kaga jirtaa dalalka aan u diyaarsaneyn la tacaalida COVID-19?Kaalintee ayey Soomaaliya kaga jirtaa dalalka aan u...
Kenya oo qaaday tallaabo shaki badan abuurtay xilli uu muran BADEED kala dhaxeeyo Soomaaliya
Dhageyso: DF Soomaaliya kaalin ma ku lahayd sii daynta Qalbi-Dhagax Xogo hore loo Ogeyn oo haatan la shaaciyay
Shimbir looga shakiyey basaasnimo oo xabsi la dhigay&arin yaab leh oo kadhacday…
Shir lagu qiimeynayo shaqadda dowladda oo ka furmay Muqdisho